Nanomboka tamin'ny Febroary 2021, niverina tsikelikely ny PPI an'ny indostrian'ny taratasy, ary tamin'ny Mey 2021, ny PPI an'ny indostrian'ny taratasy dia hitombo 5.0% isan-taona. Noho ny fisondrotan’ny vidin’ny pulp sy ny angovo eran-tany amin’ny fiakaran’ny famokarana taratasy, izay nampiakatra ny vokatra...
Ny vokatra vita amin'ny taratasy dia manolo ny vokatra plastika
Maminavina ny manam-pahaizana fa ny famokarana sy fivarotana vokatra maitso amin'ny taonjato faha-21 dia ho lasa fomba mahazatra amin'ny varotra manerantany. Ny vokatra plastika dia mitondra fahafaham-po ho an'ny olombelona amin'ny fotoana iray ihany, fa koa mamokatra be dia be ny "fotsy loto", izay nanjary olana ara-tsosialy lehibe ...
Inona no atao hoe COVID-19 ary ahoana no hisorohana izany?
Ny COVID-19 (Corona Virus Disease 2019), fantatra ihany koa amin'ny hoe "COVID-19", dia nomen'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana ho "aretin'ny coronavirus 2019"  , manondro ny pnemonia vokatry ny otrikaretina vaovao coronavirus 2019. Ny 11 febroary 2020, ny tale jeneraly Tedros Adhanom Ghebreyes...
Ny angovo dia manondro ireo loharano afaka manome angovo. Ny angovo eto matetika dia manondro angovo hafanana, angovo elektrika, angovo maivana, angovo mekanika, angovo simika sy ny sisa. Ny akora iray izay afaka manome kinetika, mekanika ary angovo ho an'ny olombelona dia azo zaraina ho thr...